टिक-टक चलाएरै नेत्रले बनाए ७० लाखको घर, त्यो बेला सबैले बौलायो भनेका थिए (भिडियो हेर्नुस) – Ap Nepal
टिक-टक चलाएरै नेत्रले बनाए ७० लाखको घर, त्यो बेला सबैले बौलायो भनेका थिए (भिडियो हेर्नुस)
आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि म्युजिकल्ली बाट उनले सुरु गरेका थिए । त्यो अवस्थामा नेपालमा लाईभ बस्ने कोहि हुदैन थिए । सायद नेपालमै लाइभ बस्ने नेत्र पहिलो ब्याक्ती हुन । नेपालमा लाईभ भएको कोहि नदेखेको उनले बताए ।
केही समय पछि नाम परिवर्तन भएर टिकटक भयो । त्यस पछि भने यस्को प्रयोकर्ता बढ्न थाले साथै लाइभ बस्नेहरु पनि थुप्रै हुन थाले । पहिले देखि नै टिकटक लाइभ बसे पनि पैसा आउने रहेछ भनेर चै युट्युव हेरेर थाहा पाएको नेत्र बताउँछन ।
लाईभ बस्दा बस्दै उनलाई त्यो आनन्द दिने माध्यम बन्यो । बिदेशीहरुले लाइभ बस्दा गिफ्ट पठाइदिन्थे । तर त्यो गिफ्ट त पैसा पो रहेछ भन्ने नेत्रले पछि थाहा पाए । त्यसपछी भने दिनको ६/७ घण्टा उनी टिकटक लाइभ मै बिताउन थाले ।
उनी त्यसरी घरमा ६/७ घण्टा टिकटक लाइभमा बोल्दै बसेको देखे पछि धेरैले बौ’लाएको भन्न थाले गाउँघर तिर । तर पनि उनले आफ्नो काम गर्न भने छोडेनन । नेत्रले कुनै दिन ७१ हजार भन्दा धेरै कमाएको बताए । उनले अहिले दुई तलाको घर बनाएका छन । जसमा ७० लाखभन्दा धेरै खर्च भएको बताए । जुन सबै ३ वर्षमा टिकटकबाट उनले कमाएका हुन ।
पुरानो घर सबै तिर भत्किन थाले पछि ६ वर्ष अघि नेत्रका बुबाले आफू रिन काडेर नै भए पनि एउटा पक्की घर बनाएर राख्छु भन्दै आफुहरुलाई उहाको सपना सुनाएको उनले बताए । तर केही समयमै बुबाको गाउँमै र’हस्य’मय तरिकाले श’व भेटिए पछि बुवाको सपना सपनामै सिमित रह्यो । अहिले नेत्रले बाबुको सपना पूरा गरेको बताउँछन ।
बुबाले जहाँ जसरी घर बनाउने सपना देख्नु भएको थियो आफुले त्यहिँ त्यस्तै घर अहिले बनाएकोले बुवाको सपना पूरा गरेको उनले बताए । तर बुवाले त्यो देखेको सपना वास्तविकतामा भने देख्न नपाएको उनको भनाई छ ।
Posted in अन्तरवार्ता, भिडियो, मनोरंजन
Prevआज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर
NextDV (डिभी) लोटरी २०२३ भर्ने मिति घोषणा …
विष्णु माझीको अर्को गीत पनि बन्यो हिट, ३० घण्टामा १० लाख बढीले हेरीसके (भिडियो सहित)
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल असोज २ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १८ तारीख
वेहुलाको थामिएन मन, फेरी विवाहको अर्को भिडियो भाइरल-हेर्नुस (भिडियो सहित )
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (118152)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (37844)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (35882)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (35600)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33871)